Ezase-Afrika Archives - Bayede News
Leli ngelinye lamazwe elalingene lagamanxa ezindabeni zaseNingizimu Afrika ngesikhathi sobandlululo. Amasosha akuleli ayenezinkambi e-Angola ayehambisana…...
Kubantu abaningi ezwenikazi i-Afrika uma becabanga ngendawo abangapepenyeka kuyo ngamaholidi, isiqhingi iMauritius asisali. Sidume ngezintaba…...
Isonto elisongwayo liyongena emlandweni weMalawi nomhlaba wonke ngenxa yesinyathelo sikaMengameli wakhona uDkt uLazarus Chikwera ohlakaze yonke ikhabhinethi yakhe kungazelelwe ekhala ngenkohlakalo
Leli lizwe kungenzeka lubambe ukhetho ngaphambi kwezinguquko okuhloswe ngazo ukulungisa ukungabikhona kozinzo kwezepolitiki. Nohulumeni ufuna…...
Umlando nesimo samazwe angomekhelwano akuleli iBotswana ne-Eswatini
IBotswana iyizwe elise-Afrika eseningizimu enhla neNingizimu Afrika eliwumhlaba ovulekile elingenalo ulwandle.
Kuseyizwe eliheha kakhulu izivakashi yize ligubuzelwe umsindo wezepolitiki
Leli lizwe elibuswa yiNgwenyama ligubuzelwe yimibhikisho ehambisana nokubulawa kwabantu, kushiswa izakhiwo abantu befuna uMswati Wesithathu ehlise abakubiza ukuxhashazwa kwemali nokuphila impilo ewubukhazikhazi.
Ibhomu ebiloqondiswe kwabe-UN liqhumele esikoleni eSomalia
Kuqhume ibhomu ebelicushwe emotweni ngumnikazi wayo ngaphandle kwesikole enhlokodolobha yaseSomalia lapho kufe khona abantu abayisishiyagalombili…...
NgoNhlaba uHulumeni washintsha iziphathimandla zombuso ezifundazweni zaseNyakatho yaseKivu nase-Ituri wafaka amaphoyisa namasosha emzamweni wokuthuthukisa amashumi eminyaka ezindabeni zokuphepha esifundeni esicebe ngezimbiwa.
Abantu abakwazanga ukuwela eKhartoum besuka e-Omdurman kanye nelinye idolobha elingasenhlokodolobha, iKhartoum North, ngenxa yokuthi abezokuphepha babevale amabhuloho omfula iNayile
UGetachew uthe abekho abalimele futhi akanalo ulwazi ngokuhlaselwa endaweni ekuthiwa ikwa-Adwa.
Umbiko wamaphoyisa ngokubhikisha kwabasebenzi bakaHulumeni ngoLwesithathu uthe abezokuphepha badubule umbhikishi oyedwa ngenhlamvu yenjoloba, kodwa amaphoyisa abengenalo irekhodi lokufa kwabantu ngesikhathi sezinxushunxushu.
Ukuba khona kwamaphoyisa amaningi kakhulu kumise noma iyiphi imashi ezansi eHabib Bourguiba Avenue enkabeni yeTunis, kepha yize abanye bababhikishi bejikijela amabhodlela epulasitiki, akubanga khona kungqubuzana
ISudan yaba yisikhungo sokukhwabanisa imali nokuxhasa ngezimali ubushokobezi
UNdunankulu uChoguel Maiga akakuqinisekisanga ukuthi ngabe uHulumeni usezingxoxweni nanoma yiliphi.
Ukhetho lukazwelonke, oluhlelelwe uZibandlela zingama-24, lwagqugquzelwa njengendlela yokuqeda le nkinga yaseLibya eyathatha iminyaka eyishumi.
Izwe i-USA likhathazeke kakhulu ngokulwa ezingxenyeni ezithile zase- Ethiopia, kusho uMnyango Wezwe wase-USA ngoLwesihlanu, unxenxa…...
NgoLwesithathu, kuvele ukuthi abavumelani abaholi ababili abanohlonze baseSomalia ngemuva kokuthi beqoke abantu abahlukene ukuba bahole…...
Akukacaci ukuthi ngobani ababedubulana. Isikhulu esiphezulu kuhulumeni sithe uMengameli u-Alpha Conde oneminyaka engama-83 akalimalanga kodwa akazange anikeze eminye imininingwane.
Ukuhlaselwa kwangoLwesithathu esikoleni samabanga aphakeme esigodini saseKaya kube okwakamuva lapho kugaselwe khona izikole ezingasenyakatho-ntshonalanga ngamaqembu ezigebengu ezihlomile afuna imali yezihlengo
Kusolwa izinswelaboya nobugebengu obuhleliwe eNigeria
Ukubulawa kwabantu abangama-23 ababebuya emcimbini wabenkolo yamaSulumane eNigeria kwaba ukuhlasela okwakuhlelwe ngabasolwa asebevele bengaphakathi ejele,…...
IZambia isikhulumile kanti abanye bashaqekile
Amaphoyisa aseZambia anxuse izakhamizi ukuthi ziyeke ukuveza ukukhungatheka kwazo ngokubhikisha ezitaladini. Isikhalazo siza ngemuva kokuthi ikhomishini…...
UNgqongqoshe Wezamabhizinisi Amancane waseLesotho, uThesele Maseribana (osesithombeni), unxuse uMengameli Cyrill Ramaphosa ukuthi avule iminyango ngokushesha…...
Amaqembu alwela umbuso wentando yeningi eMbusweni waseSwatini adube inkhulumomphendvulwano kazwelonke ebizwe yiNkosi uMswati III. Inkulumompikiswano…...
Amasosha esifundeni esisenyakatho neTigray e-Ethiopia asededele amasosha kahulumeni angaba ngu-1 000 athunjwa ngesikhathi kuliwa impi…...